musha > Teki
Europe chinhu kondinendi incredible kuongorora! Nezvinhu zvizhinji zvakadaro kuona, kuita uye wanikidza, zviri nzvimbo yakakwana kuronga zvisingaperi, Europe anosangana nechitima. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, Chitima Chakachipa…
dzokugara Cheap European chinhu inopisa musoro. Kutanga kwazvose, vashanyi mu Europe anogona kuona zvose kubva kofi zvikuru zvitoro kuti mahombekombe yakanaka. Somugumisiro kumaguta akaita Venice, Rome, uye Paris mamiriyoni evashanyi kuenda Europe ose gore. Hwatakatanga mazita yakachipa pashiri…